RFQ-Ningbo Yongxiang Plastics Industry Co., Ltd.
1. Ngaba ungumthengisi okanye umenzi?
Sinefektri yethu eYuyao kwaye senze urhwebo olusekelwe kuyo.
2. Ndingalifumana nini ixabiso?
sikholisa ukucaphula kwiiyure ezi-2 emva kokuba sifumene umbuzo wakho. Ukuba ungxamiseke kakhulu ukufumana ixabiso, nceda usitsalele umnxeba okanye usixelele kwi-imeyile yakho ukuze siwuthathele ingqalelo umbuzo wakho ophambili.
3. Ndingayifumana njani isampuli ukujonga umgangatho wakho?
kwireferensi yomgangatho, sinokubonelela ngeesampuli zasimahla.
4. Ingaba iimveliso zakho zisemgangathweni olungileyo? Ndingakuthemba njani?
Ewe. singabavelisi abaziingcali eTshayina, sineminyaka eli-13 yamava okuvelisa isitshizi. kwaye iimveliso zethu ziye zaphumelela igama elihle. Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukuba uqhagamshelane nathi, nceda usithembe, asiyi kukuphoxa.
5. Ndingalindela ixesha elingakanani ukufumana isampuli?
Emva kokuba uhlawule intlawulo yempahla kwaye usithumele iifayile eziqinisekisiweyo, iisampuli ziya kuba zilungele ukuhanjiswa kwiintsuku ze-7-15. Iisampulu ziya kuthunyelwa kuwe nge-express kwaye zifike kwiveki. Ungasebenzisa i-akhawunti yakho ye-express okanye usihlawule kwangaphambili ukuba awunayo i-akhawunti.
6. Ndingayikhetha imibala?
Ewe, unokukhetha umbala owufunayo.
7. Liliphi ixesha lokuhambisa?
20 -25 Iintsuku emva kwentlawulo.
8. Ndingandwendwela umzi-mveliso wakho?
Kanjalo. Wamkelekile nanini na.
Nceda usithumelele i-imeyile kwaye siya kuzama ukunceda.